Ụbọchị My Pet » Atụmatụ maka mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na Tinder na ndị ọzọ Mobile égwu
E nwere oge mgbe ụbọchị, mmadụ abụọ nwere izute onye ọ bụla ọzọ na onye; wee bịa online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị; ma ugbu a online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị nwere alaka ọhụrụ, ọ na-akpa site mobile ngwa.
Ikpeazụ di na nwunye nke afọ hụrụ mwepụta nke a ọnụ ọgụgụ nke ndị dị otú ahụ ngwa; ihe kasị mma banyere ọtụtụ n'ime ndị ngwa bụ na ha nwere ike ibudata free nke na-eri.
Ezie Tinder bụ ma eleghị anya ndị kasị ewu ewu free mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na-eji ngwa, e nwere ọtụtụ ndị ọzọ nke ya-ụdị nke na-eji nnọọ ukwuu; ihe atụ na-agụnye mgbabere uzo, OkCupid, Kọfị Emerie Bagel, Ụbara Azụ, were gabazie.
N'okpuru bụ ụfọdụ ihe Atụmatụ na otu onye ga-agbaso mgbe akpa na Tinder na ndị ọzọ na mobile ngwa.
Buru nri photos: Ị ga-eburu gị foto ọma irrespective nke mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na-eji ngwa ị na-eji; a mma foto bụ oké ụzọ grabbing uche nke nwere mkpakọrịta nwoke na nwaanyị mmekọ. Otú ọ dị, nwere nri foto na-aghọ ọbụna ndị ọzọ dị mkpa ma ọ bụrụ na ị na-eji Tinder, nke bụ foto dabeere ngwa.
On Tinder, gị ịchọta a zuru okè egwuregwu na-adabere ukwuu n'ime na profaịlụ gị foto. A ọjọọ profaịlụ foto nwere ike ịkwụsị gị gaje ọkụ si na-egosi ndị ọzọ nwere mmasị n'ebe ị.
Kwesịrị, mbụ profaịlụ foto ị bulite na Tinder kwesịrị ịbụ ihe mara mma foto nke ihu gị, nke abụọ profaịlụ foto kwesịrị igosipụta gị ogologo na nke atọ otu onye nwere ike ngosi gị si ebi ndụ ma ọ bụ na-enwe ntụrụndụ.
Otu ihe ị ga-eme ka ị, karịsịa ma ọ bụrụ na ị bụ nwaanyị, na-na-ebugote foto nke onwe gị dị ka nwa ewu; ikenye selfies na cheesy tit-gbaa kwesịkwara izere.
Kpachara anya mgbe ede profaịlụ gị nkọwa: Mgbe ị na-akwa banyere mkpakọrịta nwoke na nwaanyị, ị kwesịrị ị na mgbe na-agbalị ike a omimi AURA gburugburu onwe gị.
Buru n'uche na ọ bụ ezie na ị na-eji a mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na-eji ngwa, gị ihe mgbaru ọsọ kasịnụ na-aga eche ndị mmadụ ihu na-ahụ ihu; otú, e nweghị ebe ụgha ma ọ bụ ndị na-egosi onwe gị dị ka onye na ị bụghị.
Ọ bụrụ na ihe nile banyere gị adịghị mma, eme ka a na ndepụta nke ihe ndị kasị akpali eziokwu banyere gị na-agụnye ha na profaịlụ gị nkọwa. Egbula gosipụ kasị adọrọ mmasị facades nke ndụ gị, ihe atụ ma ọ bụrụ na i nwere na-akpali akpali ọrụ ma ọ bụ na-enwe ntụrụndụ, ekwu okwu banyere ya n'ụzọ zuru ezu na.
I nwere ike ịbụ a obere witty kwa dị ka ndị mmadụ na a bit nke ama bụ mgbe ihe na-ewu ewu.
Always ikwu: Ị natara ozi na Tinder (ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ mobile mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na-eji ngwa ị na-eji), ma onye na-ezipụ ndị ozi egosighi na-akpali mmasị gị ọtụtụ. N'ọnọdụ ndị dị otú, kama na-ezere eziga a zara, ị ga-ekwe ka onye nke ọzọ maara na ị na-enweghị mmasị.
Mụta oge ozi gị: Nke a n'ọnụ dị mkpa karịsịa ka ndị inyom; Otú ọ dị, ọnọdụ ụfọdụ, ndị ikom kwesịkwara ịkpachara anya banyere usoro iheomume nke ozi ha izipu.
Ọ bụrụ na ọ bụ a izu ụka, inyom kwesịrị izere wetere na ide ozi n'ekwe ntị spree mgbe 10 abalị, ha nwere ike ime ya ma ọ bụrụ na ha na-achọ ka jikọọ.
Olileanya a Atụmatụ enyere gị aka inwe a zuru okè egwuregwu na Tinder ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ mobile mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na-eji ngwa na arụmọrụ ugbu a. Dị nnọọ jide n'aka na ị na-adịghị ọsọ ihe nke ukwuu; na-uche ochie na-ekwukarị: “ngwa ngwa ma na otu ebe-enweta nkwanye agbụrụ”.
6 Summer Ụbọchị mata echiche